यसरी सकिन्छ गर्मीमा स्किन सुन्दर राख्न
पोखरा असर ll कामकाजी महिलालाई आफ्नो कार्यस्थल जान यातायात जाम, धुलो, धुवाँसंग दैनिक जुध्नुपर्छ । यसले उनीहरुको सौन्दर्यलाई पनि असर पारिररहेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा महिलाहरुले आफ्नो अंगको स्वच्छतालाई पनि ध्यान ...
विश्वकै ‘हट’ नर्स, सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर भाइरल
एजेन्सी २६असार l बिरामीको सेवामा रमाइरहेकी अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित एक अस्पतालकी नर्स सामाजिक सञ्जाल ‘इन्स्टाग्राम’मा तस्बिरहरु राखेको भरमै विश्वकै सबैभन्दा ‘सेक्सी’ नर्स बन्न सफल भएकी छिन् । डिउटीको समयमा अस्पतालमा बिरामीको सेवा ...
वर्षायाममा के नखाने ? जानी राख्नुस बहुउपयोगी छ
बासी तथा मसलेदार खाना यो मौसममा नखानुहोस् । वर्षा मौसममा मानिसको पाचन प्रक्रिया सुस्त हुन्छ । खाना पच्न लामो समय लाग्छ । बासी र मसलेदार खानाले पेटमा खराबी गर्छ । यो समयमा ...
मेकअप नारीको महत्वपूर्ण गहना हो । त्यसैले व्यक्तित्वलाई कायम राख्न मेकअपमा सचेत हुनुपर्छ । मानिसको नजर सबैभन्दा बढी अनुहारमै जान्छ । धेरैले शरीरका अन्य भागको तुलनामा अनुहारलाई बढी ध्यान दिन्छन् । ...
नेपालमा ठुलो मात्रामा पशुपंक्षीको काटमार हुन्छ । पशुअधिकारवादीहरुले यसरी पशु मारेर मासु खानुभन्दा शाकाहारी हुनु राम्रो हो भन्दै अभियान नै चलाएका छन् । तर, शाकाहारी हुनुका फाइदा पनि छन्, बेफाइदा पनि ...
१. कार्बोहाइड्रेट – शक्ति प्रदान गर्छ । ७०–८० प्रतिशत शक्ति यसैबाट प्राप्त हुन्छ । – यसको नाप्ने इकाइलाई किलो क्यालोरी भनिन्छ । – एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट बराबर चार किलो क्यालोरी शक्ति प्राप्त हुन्छ । २. ...
पूर्वराजाकी आमा अस्वस्थ
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र साहकी आमा रत्न राज्य लक्ष्मी देवी साह अस्वस्थ भएपछि नर्भिक अस्पताल पुर्‍याइएको छ । पूर्व मुमा बडामहारानी रत्न शाह अस्वस्थ भएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको छ । शाह स्वास्थ्य परीक्षणका ...
गर्मीयाम सुरु भएसँगै इटहरीस्थित नेपाली सेनाको पूर्वी पृतना मुख्यालय परिसरमा रहेको सामुदायिक सर्पदंश उपचार केन्द्रमा विभिन्न स्थानका पीडितहरु आउने क्रम बढेको छ । पहाडी क्षेत्रसँगै तराईका विभिन्न जिल्लामा विषालु र विषालु नभएका ...
मानिसमा देखिने क्यान्सरमध्ये आफैं जाँच गरी पत्ता लगाउन सकिने क्यान्सर स्तन क्यान्सर हो । आफैँले घरमै बसी सरलताका साथ आफ्नो स्तन जाँच गरी समयमै यो रोगबाट बच्न सकिन्छ, जसलाई ब्रेस्ट सेल्फ इक्ज्यामिनेसन ...
टेस्ट्युब बेबी सेवा वर्ष दिनदेखि अवरुद्ध
गत वर्षको भूकम्पपछि बन्द रहेको परोपकार प्रसुति ‘टेस्ट्युब बेबी’ सेवा अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । सरकारी स्तरमा पहिलोपटक प्रसुति गृहले आईभीएफ प्रविधिबाट यो सेवा सञ्चालनमा ल्याएको थियो । भूकम्पका कारण अस्पतालका ...
यस्ता दम्पत्ति खुशी हुन्छन्
तपाईंहरू आफ्नो जोडीसंग सुत्दा बीचमा कति ठाउँ छाड्नुहुन्छ ? दम्पत्ति सुत्दा हुने दूरीका आधारमा अनुसन्धानकर्ताहरूले एक तथ्य पत्ता लगाएका छन् । अध्ययनका अनुसार जोडी सुत्दा दूरी जति कम हुन्छ, उनीहरूबीचको संबन्ध ...
काठमाडौं । गर्मीको समयमा कपाललाई अतिरिक्त सुरक्षा र हेरचाहको आवश्यक्ता पर्ने गर्छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार नारिवलको तेलले टाउको र कपाललाई मसाज गर्नपर्छ । समयरसमयमा कपाललाई तलबाट कटाउँदा अरु कपाललाई समस्या हुँदैन । ...
पर्ल स्ट्रीट जर्नल पोखरा, १७ बैशाख l पोखराको बगालेटोलमा रहेको लेकसिटी हस्पिटल एण्ड क्रिटिकल कियर प्रालिमा डायलसिस गराउने क्रममा एक जनाको ज्यान गएको छ । विहिवार दिउसो डायलसिस गराउदै गरेका ५० बर्षीय ध्वज ...